Nadaafad habboon sida deeq bixiye loogu talagalay carruurta iyo dhallinyarada
Nadaafad habboon carruurta iyo dhallinyarada
Meeqa jeer ayaad cunaysaa iyo intee in le'eg cunto nafaqo leh?
Dheeraadka macquulka ah waa la ogol yahay
Isku-darka caafimaad leh ee habboonaanta cuntada ayaa asalkeedu ka kooban yahay isku-dheelitirnaanta isku dheelitiran ee xayawaanka iyo dhirta. Wax soo saarka tamarta ee ugu fiican ayaa waxaa inta badan ka kooban carbohydrates (50-55 boqolkiiba) sida miro, khudradda, baradhada iyo miraha.
Kaliya qayb yar oo dufan ah (ugu badnaan 30 boqolkiiba) dufanka iyo saliidda qudaarta iyo saamiga yar ee borotiinka xayawaanka iyo qudaarta (10-15 boqolkiiba) waa lagama maarmaan.
Haddii dheellitirka dabiiciga ah lagu gaadho halkan, ilmuhu si wanaagsan ayuu u daryeeli karaa uma baahna wax dheeraad ah.
Sidee loo aqoonsan karaa nafaqo-xumada?
Ilmuhu ma cunaa hal dhinac, sida cagaarjirta, caano la'aan, hilib aad u badan, nacnac iyo joodariyo ama badanaa macmacaanka, ka dibna la'aanta kiimikada dufanka leh, walxaha raadraaca iyo fitamiinada ayaa isbeddeli kara.
Haddii badanaa dhadhanka ayaa la doorbidayaa, tusaale ahaan cusbada, macaan, dhanaan, taasi waxay dullaysataa dareenka dhadhanka dabiiciga ah. Sidaa daraadeed, waxaa muhiim ah in carruurta loo isticmaalo in ay cunaan ugu yaraan cunto fudud.
Cunto caafimaad leh oo habboon waxay xaqiijisaa cuntada 3-5 maalin kasta. Ugu yaraan hal cunto diiran waa in lagu daraa. Waa hagaag, caloosha ayaa dareensan marka ay gaajo xitaa xitaa aysan kicin.
Cunto ahaan, waxaad ku raaxeysan kartaa miraha iyo khudaarta, rootiga ama barkadaha. Wixii ah baradho diirimaad leh, bariis bunni ah, baasto, khudaar ama saladh ayaa lagu talinayaa. Waxa kale oo ay bixiyaan kalluunka yaryar iyo suxuunta yar ee hilibka. Sida cabitaan, weli biyaha, miro iyo shaaha geedo waa raqiis. Sonkorta cabitaanka waa in laga fogaadaa, maaddaama miir khudradda hore ay ku jiraan content sonkor ah oo ah 10 boqolkiiba.
Caanuhu waxay leeyihiin waxyaabo kala duwan oo muhiim ah sida. Kalcium, fosfooraska, borotiinka, zinc, iodine iyo vitamin B2 iyo B1, kuwaas oo si gaar ah muhiim ugu ah marxaladda kobaca. Haddii uu jiro xasaasiyad caano, la tasho qof nafaqo leh.
Cunista waa arrin dabiici ah
Badanaa qaangaaradu waxay cabbiraan cunnooyinka cunnuga cunugooda iyadoo la raacayo caadooyinkooda cunida. Sidaa daraadeed waa in daryeelku waa in la geeyaa inaanu carruurta qaybo qaangaar ah siinin.
Jirku caadi ahaan wuxuu helaa waxa uu u baahan yahay. Waa caadi in caruurtu aanay wax cunin maalin kasta. Iyada oo ku xiran da'da, nooca jirka, dhaqdhaqaaqa jireed iyo jireed, cuntadu waa in la isku hagaajiyaa si gooni ah.
Dareemaha iyo caruurtu waxay noqon doonaan kuwo aad u badan oo ah hilib iyo dufan, laakiin waxay u baahan yihiin cunto fudud, maaddaama ay dheef-shiid kiimikaadkoodu si fiican u maareyn karaan. Khudaarta hore loo kariyay iyo cuntooyinka kulaylka ah waxaa si fiican loogu qaybiyaa tiro yar maalin kasta.
Xeerarka waxay ku dhiiri gelin karaan raaxaysi
Dhaqdhaqaaqyo fudud oo fudud oo fudud ayaa muhiim u ah in calooshaada ay wanaagsan tahay. Sababtoo ah dheef-shiid kiimikaad caafimaad ah ayaa bilaabmaa qaniinyada ugu horeysa. Cuntada aan u baahanahay waa ka sarreeyaa waqtiga oo idil. Sidaa darteed, nasasho gaaban kahor iyo kadib cuntada waa muhiim. Maqnaanshaha sida raadiyaha, telefishanka, akhrinta ama wada hadalka xiisaha leh waa in laga fogaadaa. Iyo sida kuwa ugu weyn: "isha ayaa kula cunaya."
Xushmadda dhadhanka macaanku waa macquul, sababtoo ah xitaa caanaha hooyadu waxay dhadhamisaa macaan.
Munching macaan oo aan naxariis lahayn
Mamnuucidda macmacaanka guud ayaa adkaan doonta in la xoojiyo. Xitaa Barafka Cuntada ayaa ku daaweynaya meel ka hooseysa cinwaanka "Extras", koox cuntooyin dulqaad leh.
Macmacaanka looma mamnuuco mabda'a. Si kastaba ha ahaatee, Machadka Cilmi-baarista ee Nafaqada Ilmaha (FKE) wuxuu ku talinayaa inaadan ka qaadin wax ka badan 10 boqolkiiba tamar-maalmeedka tamar-gelinta "ekstras". Tusaale ahaan, carruurta da'doodu tahay 7-9, kuwani waxay kudhubanyihiin 180 kcal ama kudhaca 45 grams sonkor ama 20 grams oo baruur ah.
Qalitaanka - Mashiinka dhejiska
Shaqooyinka dhinaca carruurta iyo dhalinyarada
Nacnacyada carruurta | cuntada
Caafimaadka nafaqada leh ee carruurta
Xasaasiyadda Lactose | Nafaqada caafimaadka